‘छ माया छपक्कै’ ओभरसिज बिक्री हो की जिम्मेवारी ?FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
‘छ माया छपक्कै’ ओभरसिज बिक्री हो की जिम्मेवारी ?
फिल्मी फण्डा । फिल्म ‘छ माया छपक्कै’ को ओभरसिज राइट्स विक्री भएको निर्माण पक्षले दावी गरेको छ । फिल्मको ओभरसिज राइट्स निशान बजगाँइले १ करोड १५ लाखको हारहारीमा किनेको निर्माण पक्षको दावी हो । फिल्मका लागि निर्माता रोहित अधिकारी र दिपकराज गिरी समूहले अहिले सम्मकै महँगो मूल्यमा फिल्म बिक्रि भएको दावी गरेका हुन् । तर, ‘छमाया छपक्कै’ को ओभरसिज राईट्स बिक्री नभई जिम्मेवारी मात्र दिइएको बुझिएको छ ।
विभिन्न देशमा फिल्म बिक्री गर्न सबैले कुरा गरिराख्न असहज भएको कारण निशानलाई जिम्मा दिइएको स्रोतको दावी छ । निशान निर्माता मध्येकै एक हुन् । दिपकराज गिरी समूहका एक हिस्सेदारको रुपमा निशान रहँदै आएका छन् । उनलाई जिम्मेवारी दिए, एकै जनाले सबै देशमा कुरा गर्न सकिने भन्दै जिम्मेवारी मात्र दिएको स्रोतको दावी रहेको छ ।
बुझिए अनुसार ‘छ माया छपक्कै’ले ओभरसिजमा १ करोड १५ लाख कम्तीमा उठाउने गरि बिक्री शुरु गर्ने वातावरण बनाएका छन् । यसको लागि निशानले हाल विभिन्न देशमा कुराहरु राखिरहेका छन् भने कतिपय देशहरुबाट उनलाई सम्पर्क भईरहेको छ । यस्तै सहजताका लागि निर्माण टिमले आन्तरिक जिम्मेवारीको रुपमा निशानलाई दिएको तर बाहिरि रुपमा भन्ने उनलाई नै बेचेको भन्दै फोटो सार्वजनिक भएको बुझिएको हो । जे होस् फिल्म ‘छ माया छपक्कै’ प्रति विभिन्न देशरुबाट सकरात्मक प्रतिक्रिया भने आउन थालेको छ ।
दिपेन्द्र लामा निर्देशित फिल्म आमा सरस्वती मुभिज र रोहित अधिकारी फिल्मस्को ब्यानरमा निर्माण भएको हो । फिल्ममा दिपकराज गिरी, केदार घिमिरे, जीतु नेपाल, केकी अधिकारी, सुपुष्पा भट्ट लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका छ । फिल्ममा हरि हुमागाइँको छायांकन, रोशन श्रेष्ठको द्वन्द्व, दीपक शर्माको संगीत, कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी , विपिन मल्लको सम्पादन रहेको छ ।